MAMGOBHOZI: Kuncipha impahla ekhiqizwayo kwenyuke inani, kudlalwa ngathi | News24
MAMGOBHOZI: Kuncipha impahla ekhiqizwayo kwenyuke inani, kudlalwa ngathi
eThekwini - Kungani abakhiqizi bebona kufanelekile ukuba badlale ngabathengi?
Yingoba bebona ukuthi asinakho ukuzikhethela kumele samukele lokhu abasinika kona noma bayazi ukuthi imikhiqizo yabo siyithanda kakhulu ngeke sikwazi ukuyiyeka, noma ukusidelela ngoba bebona singasile kahle emakhanda?
Isuka kuphi indaba ka-Coca-Cola yokunciphisa amabhodlela kadilinki kodwa imali isafana. Hhayi, ungangitsheli ngendaba yeSugar Tax!
Usuke wanaka ukuthi amabhodlela ka-500ml awasekho sekukhona u-440ml kodwa uma ubheka inani limi ku-R14.40? Ngoba senzeni njengempela.
OLUNYE UDABA:Sezidlule ku-R600m izindleko zokucekelwa kwempahla emanyuvesi: Nzimande
Akayedwa uCoca-Cola kulokhu, naba nabama-network omakhalekhukhwini, basijwayeza ama-data ngoba futhi bayabona ukuthi siyathanda ukuhlala si-online, banyusa inani kodwa hhayi amadata.
Yini-nje le nto eyenziwa wu-Vodacom ukuba u-1Gigabyte ubiza u-R149 kodwa awuqedi ngisho isonto, uthi usanda kuwuthenga nje bese ulokhu ulandelwa yimilayezo engapheli. Ubona kukhuphuka amanani kancane kancane, kodwa usathola okufanayo, ngendlela efanayo.
Siphenduka izigqila zabakhiqizi nezigqila zentela, sikhokha sikhokhile kodwa lutho intuthuko impilo imi endaweni eyodwa.
Constantia 13:07 PM
Road name: Spaanschemat Road Northbound